डिभोर्सपछि श्रीमतीलाई अं श दिनुपर्छ भनेर श्रीमानले यो के गरे ? ९ करोडको घर स्वाहा – PathivaraOnline
Home > रोचक > डिभोर्सपछि श्रीमतीलाई अं श दिनुपर्छ भनेर श्रीमानले यो के गरे ? ९ करोडको घर स्वाहा
Poonam July 11, 2021 July 11, 2021 रोचक	0
काठमाडौं। सुख दुखमा साथदिने बाचा सहित एक भएका श्रीमान श्रीमतीबीच सब स म्ब न्ध वि ग्रन्छ त्यसले कति सम्म गराउँछ भन्ने कुराको उदाहरण एक श्रीमानले पेश गरेका छन् । जब उ नको श्रीमतीसंग स म्बन्ध वि ग्रियो डि भोर्सपछि श्रीमतीलाई अं श दिन नपरोस भनेर ९ करोड मुल्य पर्ने आफ्नो घर जलाए । श्रीमतीलाई घर भित्रका सामान पनि निकाल्न दिएनन् ।
उनको वदमासी यस्तो सम्म भयो की बिमा कम्पनीमा पैसा दा वी गर्न नमिलोस भनेर उनले बिमाको किस्ता पनि बुझाएनन् । यो घटना बेलायतमा भएको हो । ती व्यक्तिले घरमा आ गो ल’गाएपछि दमकल विभागलाई फोन पनि गरेनन् ।
जव यस विषयमा उजुरी पर्यो अदालतमा पेश भएका उनले आफ्नो सबै योजना सुनाएका थिए । पुलिस र दमकल विभागले अदालतलाई यो आ गो आकस्मिक नभइ जानीजानी लगाइएको बताए पछि उनको यो जना खुले को थियो । जाँचकर्ताहरुले ७५ वर्षका जोन म्याक्केरीलाई आगो लगाएकोमा दो षी बताउँदै उनी एक्सेटर नजिकै केनफोर्डमा रहेको आफ्नो घरको हुन ला गेको लिलामीबाट अ सन्तुष्ट रहेको बताए ।
डेलीमेलका अनुसार यो घरमा जोन म्याक्करी र उनकी पत्नी हिलारी २० वर्षसम्म साथमा बसेका थिए । आ गो लगाएपछि उनी आरामले कुर्सीमा बसे र फेरि म दि रा लिन थाले ।
जाँचकर्ताहरुका अनुसार घरमा १७ जूनमा आ गो लगाइएको थियो जबकि त्यसको ३ दिनपछि यो घर ५ लाख ५० हजार पाउण्डमा बेचिँदै थियो । तर, आ गो लागेपछि यो घर यति खराब भयो कि यसको मूल्य घटेर ३ लाख २० हजार पाउण्डमा बेचियो ।
यो फोटोले के गर्यो यस्तो बेहुली बिवाहको मण्डव नपुग्दै बीच सडकबाट कता गए
चीनमा क्रिश्चियनहरुको पवित्र बाइबल ज लाइयो, चर्च भत्काइयो – भिडियोमै हेर्नुहाेस्
०७८ असोज ०३ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशि अनुसारकाे भाग्यफल, हेर्नुहाेस्